श्रीमान–श्रीमतीबीच उमेरको अन्तर कति ? यस्तो छ अनुसन्धानको निचोड « Khabarhub
श्रीमान–श्रीमतीबीच उमेरको अन्तर कति ? यस्तो छ अनुसन्धानको निचोड
एजेन्सी– सामान्यतया युवतीहरु पनि आफूभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने चाहाना राख्छन् । उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफूभन्दा बढी उमेरकै खोज्छन् ।
अक्सर युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा खोज्छन् । उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी आफूभन्दा परिपक्क होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरु आफूभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग सम्बन्ध गाँस्न रुचाउँछन् ।
सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको । धेरैजसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ । तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन ।
कोही श्रीमान–श्रीमती १ बर्षका जेठो–कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ ।
जर्जिया एटलान्टाको एमोरी युनिभर्सिटीको अध्ययनकर्ताले यसै सम्बन्धमा एक अध्ययन गरेका थिए । त्यसमा तीन हजार दम्पतीले भाग लिएका थिए ।
उक्त अध्ययनको उद्देश्य थियो कि, के कारण दाम्पत्य जीवन लामो समयसम्म सुमधुर रहन्छ । अध्ययनका क्रममा उमेर, जाति, पढाई, रोजगार, धर्म, आय, परिवारमा सदस्य संख्याको जानकारी लिइयो ।
यस किसिमको डाटाबाट अध्ययनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि रिलेशनसिप र प्रेमको दृष्टिबाट निष्कर्ष निकाल्न सहज भयो । यो अध्ययन केवल यही कुरा पत्ता लगाउनका लागि गरिएको थियो । के वास्तवमा सफल र लामो सम्बन्धका लागि पार्टनरबीचको एज ग्यापले कुनै अर्थ राख्छ ?
यो अध्ययनमा हासिल गरिएको जानकारीलाई तीन हिस्सामा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो, ति दम्पती जसको उमेर अन्तर एक बर्षभन्दा कम छ । यसरी उमेर अन्तर धेरै नहुनेको दाम्पत्य जीवन सुखमय हुन्छ । उनीहरुमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने संभावना अत्यन्तै कम हुन्छ ।
यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर पाँच बर्षको छ, उनीहरुको ब्रेकअप हुने सम्भावना १८ प्रतिशत रहन्छ । त्यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर १२ बर्षभन्दा बढी छ, उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेद हुने सम्भावना अधिक रहन्छ ।
यसको निष्कर्ष के थियो भने, दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ उत्तिनै उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट आउने र सम्बन्ध विच्छेद हुने सम्भावना बढ्छ । यसर्थ दाम्पत्य सुखका लागि श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर अन्तर पनि कम हुनुपर्छ । -एजेन्सीको सहयोगमा ।
प्रकाशित मिति : २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ६ : २३ बजे